Madaxweyne Sheekh Shariif oo hambaliyo u diray Madaxda iyo shacabka Jabuuti.
Loading...	Home Wararka Madaxweyne Sheekh Shariif oo hambaliyo u diray Madaxda iyo shacabka Jabuuti.
Madaxweyne Sheekh Shariif oo hambaliyo u diray Madaxda iyo shacabka Jabuuti.	Sunday, 27 June 2010 07:45	Iyadoo maanta ay ku beegantahay Maalintii ay ka xorowday Jabuuti gudmistihii Faransiiska ayaa waxaa hambaliyo iyo bogaadeen arinkaasi ku aadan u diray Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, isagoo shacabka reer Jabuuti kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan midnimadooda.
C/rashiid Khalif Xaashi oo dhinaca warfaafinta u qaabilsan Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya uu soo saaray warqada qoraal ah oo uu ugu hambaliyeynayo shacabka Reer Jabuuti.
Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale dhigiisa dalka Jabuuti waxaa uu si gooni ah ugu hambaliyeeyay munaasabadaani 27-ka june oo ah 33 guuradii ka soo wareegtay markii ay ka xoroobeen gumeystihii Faransiiska, isagoo Madaxweyne Sheekh Shariif sheegay in Shacabka Soomaaliyeed aysan hilmaami doonin taageeradii Jabuuti ay u fidisay dadka Soomaaliyeed.
“Waxaan shacabka reer Jabuuti ee aan walaalaha nahay u rajeynayaa ayuu yiri Madaxweyne Sheekh Shariif, in hoggaanka hufan ee Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu gaarsiin doono horumar iyo barwaaqo.
Dowladda KMG ee uu Madaxweynaha ka yahaya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sanadkii la soo dhaafay waxaa lagu soo dhisay Magaalada Jabuuti ee Jamhuuriyadda Jabuuti, waxaana shacabka reer Jabuuti Maanta ay u dabaal dagaayaan sanad guurada 33 aad ee ka soo wareegtay markii ay Xorobeen.